भाग्यमानी छोरो – Part 36 – आमाको अदलाबदली -2- Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » भाग्यमानी छोरो – Part 36 – आमाको अदलाबदली – 2
आमा र रती अनि विकेश रेलिङ्ग जस्तै गरि लगाईएको पर्खालमा आड लागेर गोदकतिरको हल्का चिमचिमे बत्ती बलेका घरहरु हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, म आमाको पछाडी टाँसिएर आमाको बुब्सलाई दुवैतिरबाट हातले बेरेर खेलाउँदै भनें “आमा के छ बिचार खुल्ला आकासमुनि दुवै प्वालमा बजाउनी हो त ?” “के भन्छ यो दुवै किन र विकेशले आफ्नै आमालाई चिक्छ नि ?” हत्केलाभरी थुक बनाएर आमाको पुतीमा दल्दै मैले भनें “त्यसोभए हजुर हेर्नुस् विकेश र म भएर रतीलाई बजाउँछौं ।“ त्यसपछी म आमालाई छोडेर रतीसँग टाँसिएर रतीको स्कर्टलाई माथी सारेर कमरमा पुर्*याएर हत्केलाले रतीको पुती थपथपाउँदै भनें “ओई विकेश आईजा !” विकेशले रतीको बुब्स खेलाउन सुरु गर्*यो, मैले पेन्ट खोलेर लाँडो निकालेर रतीको हातमा थमाईदिएँ । रतीले विकेशको मुखमा मुख जोडेर अर्को हातले आफ्नै बुब्स खेलाउँदै एउटा हातले मेरो लाँडो खेलाउन थालिन् । केहिबेरमै विकेशले रतीको पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्न सुरु गर्*यो भनें, रतीको मुखमा म लाँडो चुसाउँदै थिएँ । सुमीना (आमा) हामीलाई हेरेर थुक निल्दै आफैंले आफ्ना बुब्स मसल्दै थिईन् । मैले सुमीनालाई आफूतिर ईशाराले बोलाएँ, जब सुमीना मेरो छेउमा आईपुगिन् मैले हत्केलाले बुब्स च्याप्प समाएर आफूतिर तानें अनि मुखमा मुख जोडेर टङ्ग किस गर्न सुरु गरें । जब मेरो मुखबाट सुमीनाको मुख छुट्टियो सुमीनाले जालीदार टि-शर्ट खोलेर भुईमा खसाईन् र झुक्दै रतीको मुखबाट मेरो लाँडो निकालेर आफ्नो मुखमा छिराएर चुस्न थालिन् । मैले विकेशलाई भनें “ओई विकेश कति आफ्नै आमालाई मात्र चिक्छस् आइज मेरो आमालाई चिक् !”
विकेशले रतीको पुतीबाट लाँडो निकाल्यो र मेरो आमाको छेउमा आयो अनि झुकेर मेरो आमाको चाकमा दुवै हातले पुठ्ठा समाएर माथी उठायो । जब सुमीनाको चाक विकेशको लाँडोको लेबलमा पुग्यो विकेशले सुमीनाको पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्न सुरु गर्*यो । रती उठेर मेरो नजिक आईन् र मैले आमालाई लाँडो चुसाउँदै रतीको बुब्स चुस्न थालें । निकैबेर त्यो कृयालाई निरन्तरता दिएपछी म भुईमा बसेर लाँडो ठड्याउँदै आमालाई भनें “यता आउनुस् आमा अब तपाईको छोरोले तपाईलाई चिक्छ !” आमा मेरो छातीपट्टी चाक फर्काएर मेरो काखमा आएर बसिन् र मैले उनको चाकको प्वालमा लाँडो छिराएर चिक्न थालें । एक-डेढ मिनेट चिकेपछी मैले विकेशलाई गाली गर्दै भनें “मुजी तलाईं जतिखेर पनि आदेश दिनुपर्छ, खाली प्वालमा लाँडो छिराउन सक्दैनस् !” त्यसपछी विकेश हतारिदै आयो र आमाको पुतीमा लाँडो छिरायो । विकेश र म मिलेर आमालाई निकैबेर सम्म चिक्दै रह्यौं, रती भने मलाई पुती चुसाउन थालेकी थिईन् । निकैबेर चिकेपछी सुमीना थाकेको जस्तो लागेपछी मैले सुमीनाको चाकबाट लाँडो निकालें अनि आमालाई उठाएँ, त्यसपछी विकेशलाई भुईंमा लाँडो ठड्याएर बस्न भने, मैले केहि भन्नुभन्दा अगाडीनै रती विकेशको लाँडो पुतीमा छिराएर मच्चिन थालिन्, मैले रतीको चाकमा लाँडो छिराएर चिक्न सुरु गरें । आमा भनें “मजा आयो छोरा !” भन्दै मेरो मुखमा बुब्स चुसाउन थाल्नुभयो । निकैबेर रतीको चाकमा चिकेपछी मैले चाकबाट लाँडो निकालेर रतीको पुतीमै छिराउन लाग्दा आमाले विरोध गर्दै भन्नुभयो “के गरेको दुई-दुईवटा लाँडो एउटा पुतीमा छिराउँदा बिचरीलाई गाह्रो हुँन्छ नि ?” “तिमी बुढीमाउलाई के थाहा, यही पुतीबाट विकेश र विकेशको दिदी जन्मेका होईनन् र ? नमिलेर मात्र हो नत्र दश-पन्ध्रवटा लाँडो छिराएपनि केहि हुन्न ? बरु हजुर रतीलाई बुबु चुसाउनुस् !” मैले त्यति भनेपछि सुमीनाले रतीलाई बुब्स चुसाउन थालिन् रतीले “छोरो चाँही हजुरले गजबै पाउनुभा हो, कसलाई कसरी कहाँ चिक्नुपर्छ भन्ने सबै जानेको !” त्यतिकैमा विकेशले झर्न लागेको कुरा सुनायो, झर्ने बेला त मेरो पनि भईसकेको थियो, त्यसैले भनें “ल दुवै आमा मुख खोलेर बस्नुस् !” त्यति भन्नासाथ रती र सुमीना टाउको जोडेर घुँडा टेकेर बसे अनि आफ्नो आफ्नो पोका हत्केलाले समाएर खेलाउन थाले, विकेश र म भनें आफ्नै हातले आफ्नो लाँडोलाई छोल्न थाल्यौं अनि छिनमै विकेशको र मेरो लाँडोबाट फुसीको पिचकारी छुट्न थाल्यो जसले रती र सुमीनाको अनुहार भरी सेताम्य बनायो ।
हाम्रो लाँडोबाट फुसी झरेर लाँडो लुत्रुक्क पर्न लाग्दा रतीले मेरो लाँडो मुखमा लिएर चुस्दै सफा गरिदिईन्, सुमीनाले पनि विकेशको लाँडोलाई त्यसै गरिदिईन् । घडी हेर्दा झण्डै सवा सात बज्दै थियो र रात निकै बढिसकेको थियो, हामीले आ-आफ्नो कपडा ठिक पारिसकेका थियौं । त्यसपछी हामी सिधै डाईनिङ्ग हलतिर झर्*यौं । साहुजीका आँखा मेरो आमाको स्कर्टतिर केन्द्रित थियो । खाना खाएर निस्कने बेलामा साहुजीले सोध्यो “गाडी कति बजे बोलाईदिउँ सर !” “बिहान ब्रेकफास्ट लिएर जाने हो त्यही अनुसार बोलाउनु न ?” त्यसपछी मैले सुमीना (आमा) लाई कमरमा समाएर रुमतिर लागें, साहुजी हामीलाई नै हेर्दै थियो, मैले आमाको स्कर्टलाई माथी सारेर साहुजीलाई पुठ्ठा मुसारेर देखाईदिएँ, विकेश त अघि लागिसकेको थियो । रुममा पुगेपछी मैले आफ्ना सबै लुगा खोलेर बेडमा पल्टिएर लाँडो मुसार्न थालें अनि भनें “विकेश तँ मेरो आमालाई चिक्दै सुत म तेरो आमालाई चिकेर सुत्छु है त ?” विकेशले हुन्छ भन्यो र मेरो आमाको शरिरमा नभएसरीको लुगा खोलेर नाङ्गो बनाएर सानो बेडमा सुताउने कोशिस गर्*यो । सिंगल बेडको त्यो खाटमा दुईजना अटाउने कुरा सम्भव थिएन । मैले रतीको कपडा खोलेर बुब्स खेलाउँदै भनें “विकेश दुवै खाट जोड्यो भने सजिलो होला !” त्यसपछी म र विकेश मिलेर सानो खाटलाई ठूलो खाटसँगै जोड्यौं । त्यसपछी दुवै आमालाई खाटको बिचमा नाङ्गै सुताएर एकातिरबाट विकेश र अर्कोतिरबाट म मिलेर आमाहरुलाई अँगालेर बेडमा पल्टियौं अनि टि.भी. खोलेर हेर्न थाल्यौं ।